Inqaku leRedmi 8 Pro iya kumilisela uhlelo lweHlabathi leMfazwe | I-Androidsis
Inqaku leRedmi 8 Pro inoshicilelo olunqunyelwe lweHlabathi leMfazwe
Kwiveki ephelile Inqaku leRedmi 8 Pro kunye neNqaku 8 zaziswa ngokusemthethweni, Uluhlu oluphakathi oluphakathi lophawu lwesiTshayina. Imodeli yePro kolu luhlu iboniswa njengefowuni eyenzelwe ukugembula phakathi kuluhlu oluphakathi. Ke ayothusi into yokuba kukhutshwe uhlelo olukhethekileyo lomdlalo, lukhuthazwe yenye yezona midlalo zidumileyo. Olu luguqulelo olukhethekileyo lweWorld Warcraft.
Le modeli iphehlelelwe phantsi kwegama iRedmi Qaphela 8 Pro yeHlabathi yeWarcraft 15th Anniversary Limited Edition. Ifika kumsitho weshumi elinesihlanu lomdlalo odumileyo weBlizzard, yenye yezona zidumileyo kwihlabathi liphela. Yintoni egqithisile, Iza nohlelo lweHordad kunye nohlelo lweAlliance.
So sidibana nyani Iinguqulelo ezimbini zale Redmi Qaphela 8 Pro. Ibhokisi nganye inesitayile esahlukileyo, nangona umxholo uyafana kuzo zombini iimeko. Kuhlelo lweHorde sinesigqubuthelo esimnyama nobomvu, nebhokisi apho sinokubona uphawu lweqela lomdlalo kunye namakhadi eWorld Warcraft. Kwelinye icala, enye ibhokisi yokubheja ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka njengombala ogcwalisa mnyama.
Sinamakhadi afanayo kuzo zombini ezi zinto zahlukileyo, nangona kunjalo izigqubuthelo zishiya ngamnye ene logo eyahlukileyo. Ukongeza, inkampani iqinisekisile ukuba imodeli nganye inamaphephadonga wesiko, aphefumlelweyo ngumdlalo. Zikwabonisa iipakethi ze icon yesiko kunye nemixholo. Yonke into ukufumana ushicilelo olukhethekileyo ngokwenene.
Ngokubhekiselele kwiinkcukacha akukho tshintsho. Bagcina ngalo lonke ixesha imigaqo yeRedmi Qaphela 8 Pro esidibene nayo kwiveki ephelileyo. Ke iibhokisi, izigqumathelo kunye neepakethi ze icon ezisebenza njengomahluko kule meko nolu hlobo lwefowuni.
Okwangoku akukho lwazi malunga nokukhutshwa kwalo kwintengiso, nakwixabiso lentengiso. Asazi ukuba ngaba olu hlobo lukhethekileyo lweRedmi Qaphela i-8 Pro luya kuphehlelelwa okanye hayi eSpain. Ke silinde inkampani ngokwayo ukuba isixelele okungakumbi ngokusungulwa kwayo kwintengiso, eya kwenzeka kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Inqaku leRedmi 8 Pro inoshicilelo olunqunyelwe lweHlabathi leMfazwe
Khuphela ezi wallpapers zasimahla ukuze ulungele ukufika kwe-Android 10 ngomso
Uyithumela njani imiyalezo ngaphandle kwesandi kwiTelegram